Teknolojia | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Teknolojia | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / Archives ho an'ny teknolojia
Fahasamihafana eo amin'ny telefaona finday sy sofina
11 Aogositra 2021 Narotsak'i Sethmini
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny écouteur sy ny écouteur dia ny earphones ampidirina ao amin'ny canal ear, fa ny headphones kosa atao manodidina ny loha ary manarona ny sofina ivelany. Ny écouteur sy ny écouteur dia fitaovana roa izay manana fiasa mitovy amin'izany. Saingy, misy fahasamihafana manokana eo amin'ny sofina sy ny sofina. Earphones, antsoina koa hoe earbuds, dia sariaka amin'ny mpampiasa […]
Filed Under: Accessories Tagged With: earbuds , earphones , earplugs , head- in headphones
Fahasamihafana eo amin'ny Podcast sy Vlog
16 Jona 2021 Narotsak'i Sethmini
Ny maha samy hafa azy eo amin'ny podcast sy ny vlog dia ny atin'ny podcast iray mifototra amin'ny audio fa ny atin'ny vlog dia miankina amin'ny horonan-tsary. Ny podcast dia rakitra audio nomerika, fa ny vlog kosa dia kaonty media sosialy na tranokala manokana misy atiny video. Samy loharanom-baovao malaza […]
Fahasamihafana eo amin'ny Blog sy Vlog
15 Jona 2021 Narotsak'i Sethmini
Ny mahasamihafa indrindra ny bilaogy sy ny vlog dia ny bilaogy indrindra manana atiny an-tsoratra ary ny vlogs kosa dia manana atiny video. Ny bilaogy dia tranokala na pejy web izay manavao tsy tapaka. Ny vlog dia mazàna kaonty media sosialy na tranokala manokana anaovana horonantsary misy lohahevitra samihafa navoaka matetika. Amin'izao fotoana izao, maro ny olona no mikarakara […]
Fahasamihafana eo amin'ny Torque sy Torsion
Fahasamihafana eo amin'ny Android 2.3 sy Android 2.3.3
Fahasamihafana eo amin'ny Mandatory sy ny fanerena
Fahasamihafana eo amin'ny Quad core Nvidia Kal-El (Tegra 3) sy Nvidia Tegra 2